जनजीवनको आँखीझ्याल- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
नियतिको फेरो समाएर
लामो समयदेखि थाँती रहेका राजनीतिक मुद्दा र जनताका आंकाक्षाका बीचको नमिलेको हिसाबलाई साहित्यमा उतार्ने क्रमको एउटा कडीका रुपमा यो उपन्यास आएको छ ।
लामो समयदेखि नेपालमा भएका राजनीतिक सामाजिक आन्दोलन, तिनले उठाएका राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक मुद्दाहरू र विभिन्न समुदायका आकांक्षाहरू मिसिएर भएको २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले ती मुद्दा र आकांक्षाहरूलाई स्थापित गर्‍यो । ती मुद्दा र आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न २०६४ को अन्त्यमा निर्वाचित संविधानसभा आफ्नो काम पूरा नगरी २०६९ मा विघटन भयो । संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने नेपालीको आकांक्षा ६ दशकपछि बनेको संविधानसभाले पनि पूरा गर्न सकेन । नेपाली समाजको विविधताको प्रतिविम्बन भएको संविधानसभा ठूला दलका ठूला नेताको 'राष्ट्रिय सहमति'को चक्रमा असफल भयो । आन्दोलनको लागि जनताले राजनीतिक दललाई साथ दिने, आन्दोलन सफल हुने, सत्तामा पुगेपछि आन्दोलको बेला उठेका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्न र व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक दल असफल रहने र आन्दोलनको रापताप घट्दै जाँदा जनताका अधिकार खोसिने, यो शृङ्खला नेपालमा २००७ सालदेखि नै सुरु हुन्छ र हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि यो दोहोरिएको छ । पटक पटकको राजनीतिक दलको असफलताले नेपालको संकट बढ्दै गएको छ ।
संविधासभा विघटन भएको ४ महिनापछि शारदा शर्माको उपन्यास 'ताप' प्रकाशन भएको छ । 'ताप' उपन्यासले नेपालमा पटक पटक राजनीतिक दलहरू किन असफल भइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको प्रस्टीकरण दिन खोजको छ । समाजले भोगेको सफलता/असफलताका कारणको खोजी प्राज्ञिक र रचनात्मक दुवै फाँटका विभिन्न विधामा भिन्न कोणबाट हुने क्रममा 'ताप' थपिएको छ ।
'ताप' आमा छोरी- चन्दि्रका र सुजाता- दुई पुस्ताको कथामा बुनिएको छ । चन्दि्रका र सुजाताको कथामा आउने उतारचढाव देखाउन अन्य पात्रहरू आएका छन् । सुजाता अहिलेको अङ्ग्रेजी स्कुल जेनेरेसनकी केटी । आफूले चाहेको पाएर, कुनै अभाव नभई हुर्केकी । समाजमा हुने सानातिना समस्या सामाना गर्न पनि उसलाई गाह्रै पर्छ ।
राणाकालमा सत्तामा भएको परिवार चन्दि्रकाका हजुरबा खेदिएर देहरादुन पुग्छन्, छोरीले धेरै पढ्न हुन्न भन्ने पारिवारिक मान्यता भएको परिवार भए पनि उच्च शिक्षाका लागि चन्दि्रका बेलायत पुग्छे । पढ्न त्यहाँ पुगेको सामान्य परिवारको युवकसँग प्रेम विवाह गरेर नेपाल आउँछे । यहाँ पतिसँग कुरा नमिलेपछि छुट्टन्िछे र छोरी लिएर हुर्काउने पढाउने गर्छे । सोच्छे छोरीका लागि मैले 'संसारलाई अस्वीकार' गरें । माओवादी विद्रोह र संकटकालको बीचमा त्यही छोरी एक रात बेपत्ता हुन्छे । सेनाको उच्च ओहोदामा नातेदार भएर पनि उसले छोरी खोज्न सक्तिनँ । उपन्यासकारले कथाका लागि बुनेका घटनाहरू संयोगहरूको शृङ्खलाको रूपमा आएका छन् । शारदा शर्माले घटनाहरू उन्दा संयोगहरूलाई प्राथमिकता दिनको कारण उपन्यास पढिसक्दा प्रस्टिन्छ । शारदाको धारणा उनका पात्रको मुखबाट निस्किएझैं लाग्छ । एक ठाउँमा चन्दि्रका भन्छे, 'सायद नियति भनेको यही होला । सबैले आफ्नो प्रारब्ध भोग्नैपर्छ होला ।'
अमेरिकाबाट बौद्ध दर्शनमा उच्च शिक्ष्ाा हासिल गरेर फर्केर कुनै गैरसरकारी संस्थामा जागिरे भएकी सुजाता क्याम्पसमा सँगै पढेको साथीसँग डिस्कोबाट घर र्फकंदै गर्दा सुरक्ष्ााकर्मीको चेकिङमा पक्राउ पर्छे । यातनाको पराकाष्ठा, सुरक्षाकर्मीको सामूहिक बलात्कार र मानसिक उपचारपछि बौद्ध गुम्बामा पुग्छे । बौद्ध गुम्बामा महिलालाई प्रबज्या लिन पनि गाह्रो हुने प्रसंग राखेर लेखकले महिलालाई अहिलेसम्म प्राप्त नभएको महास्थवीर पद सुजाताले छोटै समयमा पाउन सम्भव भएको बनाएकी छन् । तर त्यसको विश्वसनीयता स्थापित छैन । यसरी सुजातासँग जोडिएका घटनाहरू पनि शारदाले संयोगहरूले डोर्‍याएकी छन्, सुजाताको नियति स्थापित गर्न ।
चन्दि्रका र सुजाताको जीवन नियतिले डोर्‍याएको कथा बनाएर 'ताप'ले हामीले बेहोरेको विगत हाम्रो नियति हो त्यसैले 'सबैले आफ्नो प्रारब्ध भोग्नैपर्छ' भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । 'ताप'मार्फत् शारदा शर्माले- विगत ६ दशकको नेपाली राजनीतिको असफलता पनि नेपालीको नियति हो, यो भोग्नैपथ्र्यो भन्छिन् । नियतिलाई बल पुर्‍याउन बेला बेला पात्रले त्यस्तै खालका संवाद बोल्छन् । एक ठाउँमा चन्दि्रका भन्छे, 'बेलायत बस्छु भनेकी मान्छे नेपाल आएँ, मुलुक बनाउनुपर्छ भनेर नेपाल आएको प्रभाकर -लोग्ने) भने सधैंको लागि बिदेसियो ।'
'ताप'मा मुक्ति र परासर कुँवर दुई पात्र आएका छन्, जसको राजनीतिसित सम्बन्ध जोडिएको छ । परासर कुँवर पञ्चायतकालमा खेलकुद परिषद्मा हलिमुहाली गरेको पात्र, पछि राजाको प्रत्यक्ष शासनमा मन्त्री बन्छ । परासरको चरित्रमार्फत त्यो राजनीतिको चरित्र देखाउन खोजिएको छ । सेनाले बाबुको हत्या गरेपछि माओवादीमा लागेको मुक्ति पात्रको चित्रण गर्ने क्रममा उपन्यासकारले माओवादी विद्रोहको बारेमा टिप्पणी गर्न भ्याएकी छन् । यी पात्रमार्फत उनले कथालाई नेपालको राजनीतिक विकासक्रमसँग पनि जोड्न खोजेकी छन् । परासरले पञ्चायतकाल जोड्छ भने मुक्तिले माओवादी विद्रोहको काललाई जोड्छ । कथाको मुख्य चुरोका घटना संकटकालको वरिपरि घटेका छन् । नेपालमा संकटकाल अगाडि र पछाडि घटेका घटनाले राजनीतिलाई एउटा दिशामा अगाडि बढाए ।
विभिन्न शीर्षकहरू दिइएको उपन्यासका खण्डमा पात्रको नाममा पनि खण्डको शीर्षक परेका छन् । ती खण्ड तीनै पात्रको मुखबाट घटना वर्णनको शैली अपनाइएको छ । यसरी विभिन्न पात्रको दृष्टिबाट कथा भनिएको छ । चन्दि्रका महारानी खण्डमा चन्दि्रकाले आफ्नो घटना बयान गर्छिन् । जुद्धशमशेरको पालादेखि पछिल्लो सङ्कटकाल पछाडिसम्म तन्किएको कथा र घटनाक्रमका समयक्रम मिल्दैनन् । '२०१२ साल जेठ पूणिर्माका दिन जन्मेकी हु रे म' भन्ने चन्दि्रकाका बाबुआमाको बिहे भने २०१३ सालमा भनिएको छ । चन्दि्रकाको दाजु 'प्रजातन्त्रको उदय' भएको वर्ष २००७ सालमा जन्मन्छ । समयक्रमको यस्तो गन्जागोल संकटकाल लागेको भनिएको समयका घटनामा पनि भएको छ । एउटै घटना कतै भर्खर संकटकाल लागेको बेला घटेको अनुभव हुन्छ भने कतै राजाको प्रत्यक्ष शासन सुरु भएको बेला भन्ने भान पर्छ ।
कविता, कथा र निबन्धमा नाम बनाएकी शारदा शर्माको 'ताप' पहिलो उपन्यास हो । उपन्यासमा बौद्ध दर्शन तथा ध्यानसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रसंग र गुम्बाभित्र प्रयोग हुने शब्दावलीले लेखकको अध्यात्मतर्फको अध्ययनलाई बताउँछ । 'ताप'का चन्दि्रका र सुजाता दुई पुस्ताका यी आमा छोरीको दृष्टिकोणमा पुस्तान्तर छ । त्यसकारण उनीहरू एकअर्काका विपरीत देखिन्छन् । तर दुवै आमा छोरी जीवनमा संकट आएपछि संकटको सामना गर्नुको साटो सांसारिकतादेखि टाढा भाग्छन् । उनीहरू दुवैका लागि मनको शान्तिको खोजी संकटको समाधान बन्छ । सुजाता एक प्रसंगमा भन्छे, 'जीवनमा पुनरुक्ति सिवाय कहीं कतै केही नयाँपन बाँकी छैन । ....यही पट्यारलाग्दो निरन्तरको द्वन्द्वमा च्यापिइरहनलाई बाँच्नुपर्ने हो ?' अर्को प्रसंगमा चन्दि्रका स्वतन्त्रताको बारेमा भन्छे, 'मान्छे स्वतन्त्र छैन सुजाता । हामी स्वतन्त्रताको भ्रममा मात्र छौं ।...निर्बन्ध स्वतन्त्रताको अुनुभूति भनेको त मृत्यु मात्रै हो । '
हाम्रो विगतलाई नियतिवादको जिम्मा लगाउँदा इतिहासलाई कर्ता, कारण, परिणामको विश्लेषणमा बुझ्नुभन्दा सजिलो त हुन्छ नै । निणर्ायक शक्ति भएर पनि असफल भएका राजनीतिक दलहरूलाई असफलताको प्रस्टीकरण दिन अझ सहज हुन्छ । नियतिको नाममा स्थापित भएका आफ्ना मुद्दा र आकांक्षालाई बिर्सन मानिसहरू तयार होलान् त ?
प्रकाशक : सांगि्रला बुक्स
मूल्य : रू, ३४५ ।-
प्रकाशित : पुस १४, २०६९ १५:५१